Faritra Arabo: Fanehoan-kevitra @ fitokanana an’i Obama · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Janoary 2009 8:47 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, srpski, Swahili, русский, English
Androany (20 janoary) no fotoana manan-tantara eto Etazonia hanaovan'i Barack Obama fianianana amin'ny maha-prezidà faha-44 azy. Raha nihanihena ny fanohanana an'i Obama any @ tontolo arabo nandritra izay volana vitsy nanginany sy nanginan'ny governemantany nandritra ny fahafihan'ny Isiraely tany Gaza izay, dia mbola manana zavatra maro hotenenina kosa ny mpamaham-bolongana manerana an'i Moyen Orient sy Afrika Avaratra.
A Syrian in London moa efa mizara amintsika nandritra ny herinandro vitsivitsy izay ny fizotran'ny fanafihana ataon'Isiraely, ary dia nomarihany:
Not since Kennedy, and some say not never, has an American President has had such attention with such high hopes, from around the world resting on his shoulders. In his inauguration speech, President Obama said:
“we come to proclaim an end to the petty grievances and false promises, the recriminations and worn out dogmas, that for far too long have strangled our politics.”
Dare we grieve the dead?
Dare we hope for the living?
Hatramin'ny nitondran'i Kennedy, ary ny sasany miteny hoe hatramin'izay mihitsy, tsy nisy filoha Amerikana nahasarika sy nampisy fanantenana goavana tamin'izao tontolo izao izany. Niteny ny filoha Obama nandritra ny kabariny:
“NIfidy ny fanantenana isika handresy ny tahotra, fampiraisana ny tanjona hanosihosy ny ady sy ny fifandirana.”
“Tonga eto isika hanambara ny fampiatoana hatreo ny teny maharary sy ny fanantenana poak'aty, hanajanona amin'izay ny menomenona sy hanifika ny firehan-kevitra, izay nanakenda hatry ny ela ny politika”.
“Eto amin'ny filazana indray fahalehibiazan'ny firenentsika, fantatsika fa tsy atolotra velively izany fahalehibiazana izany. Tsy maintsy rombahina io.”
“Ariantsika ho toy ny diso ny fampisafidianana ny filaminantsika sy ny idealintsika”
Sahintsika ve ny hanala baraka ny maty?
Sahintsika ve ny hanantena hiaina?
Jar of Juice, mpamaham-bolongana mipetraka any Dubai, no mahatsapa fa misy banga ihany amin'ny kabarin'i Obama:
While I think Obama’s speech was brilliant – he did not flinch when he said “Muslims” but was trying hard to sound genuine when he “thanked” the imbecile of whom we do not speak of after today – I think there was a crucial element missing in this event…
…but I guess Obama won’t lower himself to acknowledge that fool more than the diplomatic gesture in his speech.
Raha nieritreritra aho hoe namirapiratra ny kabarin'i Obama – tsy nihontsona akory izy niteny hoe “Miozolomana” saingy niezaka hiseho ho niteny an-kitsim-po raha “nankasitraka” an'ilay vendrana izay tsy lazaintsika androany – mieritreritra aho fa misy singa lehibe adino tamin'iny fotoana iny…
… saingy maminavina aho fa tsy hifotetaka “hanamarina” ilay adala i Obama afa-tsy noho ny teny sy fihetsika diplaomatika atao mandritra ny kabary.
Mpamaham-bolongana Maraokana Laila Lalami, izay monina any Etazonia ary niaiky fa nifidy an'i Obama, no hita ho manam-panantenana ary faly fa tonga ny andron'i Obama:
Faly aho fa tonga ny andro nandrasana.
Valo taona lasa izay dia nifidy an'i Ralph Nader aho satria tsy hitako loatra izay tena mahasamihafa ny demaokraty sy ny repoblikana amin'ny adihevitra lehibe. Saingy taorian'ny saritaka tany Florida, sy ny fanapahan-kevitry ny Fitsarana an-tampony, ary ny fitotonganan'ny fomba fitondran'ny filoha tamin'izany dia nahazo tsoa-kevitra aho: Tsy mitovy avokoa ny mpanao politika rehetra. Fa dia misy ny tsy manantalenta mihitsy, tsy mahay misaina, tsy manana famindram-po hany ka lasa fanesoeso any am-birao. Mieritreritra ny tenako ho tsy mino ny fisian'ny olona tsara aho ka hanantena loatra izay tena fahasamihafana eo amin'ny politikam-panjakana saingy mbola mirehidrehitra kosa aho amin'ity fiovana iray ity, dia momba an'i Barack Obama sy ny fisotroan-drononon'i George W. Bush.
Mbola manao fanentanana aok'izany moa ireo mpankasitraka an'i Obama ho filoha any Maraoka mba ho any Rabat no hanaovan'ny filoha Obama kabary ivelan'i Etazonia voalohany indrindra.